လျှပ်စစ် operated linear actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > linear လျှပ်စစ် Actuator > လျှပ်စစ် operated linear actuator
လျှပ်စစ် operated linear actuator
AOX-L ကို စီးရီး လျှပ်စစ် operတစ်ဦးted lineတစ်ဦးr တစ်ဦးctuတစ်ဦးtor ဖြစ် တစ်ဦး အသစ်က generတစ်ဦးtion ၏ lineတစ်ဦးr တစ်ဦးctuတစ်ဦးtor,It အသုံးပြုမှု modulတစ်ဦးr ဒီဇိုင်း, နှင့် ကြွယ်ဝသော scတစ်ဦးlတစ်ဦးbilကy feတစ်ဦးtures ဘို့ တစ်ဦး vတစ်ဦးriety ၏ vတစ်ဦးlves တစ်ဦးnd similတစ်ဦးr ထုတ်ကုန်။The လျှပ်စစ် operတစ်ဦးted lineတစ်ဦးr တစ်ဦးctuတစ်ဦးtor တစ်ဦးre ရေးစပ် အားဖြင့် အဖွင့်အပိတ်, modulတစ်ဦးting တစ်ဦးnd ဉာဏ်ကောင်းသော ထုတ်ကုန်။ ကျော်လွန် အဆိုပါ yeတစ်ဦးrs, က hတစ်ဦးs အတွေ့အကြုံရှိ vတစ်ဦးrious လယ်ကွင်း ၏ နိုင်ငံတွင်း တစ်ဦးnd ဘို့eign mတစ်ဦးrkets prတစ်ဦးctice တစ်ဦးnd တစ်ဦးpplicတစ်ဦးtion စဉ်တွင် ဆည်းပူး အဆိုပါ rewတစ်ဦးrd ၏ မျိုးစုံ nတစ်ဦးtionတစ်ဦးl တစ်ဦးnd internတစ်ဦးtionတစ်ဦးl quတစ်ဦးlificတစ်ဦးtions.
အင်အားစုအကွာအဝေး: 3000 - 30000 N ကို
အပူချိန်: -25 တစ်ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် +70 တစ်ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ချေးအဆငျ့: Epoxy အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်း။ NEMA 4x ချေးကာကွယ်မှု
Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး:2* NPT 3/4
လျှပ်စစ် interface ကို: IP67, Optional: IP68
တွင် / ချွတ် type ကို signal ကို:
input: AC အ 110/220 input
signal တုံ့ပြန်ချက်: ပေါင်းစည်းအမှားအဆက်အသွယ်များ, ယင်းအဆို့ရှင်အဆက်အသွယ်ပိတ်လိုက်သည်အဆို့ရှင်အဆက်အသွယ်ကိုဖွင့်
အတင်းအကျပ် Switch / ကန့်သတ်ပြောင်းလဲမည်
မော်ဂျူထိန်းချုပ်မှုရွေးချယ်စရာ site ပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးနိုင်ပါသည်
လွယ်ကူသောစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အရေးပေါ်စစ်ဆင်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းထိန်းချုပ်မှု options များ
phase sequence ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
AOX-L ကိုစီးရီးလျှပ်စစ် operated linear actuator ၏ 1. မော်တော်
အပြည့်အဝ built-in အပူကာကွယ်မှု switch သည်မော်တာမှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, ပါဝါထောက်ပံ့ရေးဗို့အားနှင့် operating ကို formats optional ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ရှဉ့်-လှောင်အိမ်မော်တာ, အသေးစားအရွယ်အစား, ကြီးမားတဲ့ torque, အသေးစား inertia အင်အား, insulator တွင်လည်းလူတန်းစားက F, ပူးတွဲ။
2. အဆို့ရှင်အနေအထားများ၏ Display ကို
actuator ရဲ့အဖွင့်သို့မဟုတ်ပိတ်ပွဲလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်းအဆို့ရှင်အနေအထားများအပြောင်းအလဲကြီးမားနံပါတ်များနှင့်အတူ LCD မျက်နှာပြင်ပေါ်ကို real-time display ကိုဖြစ်ပါတယ်။
AOX-L ကိုစီးရီးလျှပ်စစ် operated linear actuator များအတွက် 3. တပ်ဆင်ခြင်း
ယင်းအဆို့ရှင်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီတပ်ဆင်အရွယ်အစား၏အောက်ဆုံး, အဆို့ရှင် installation ကိုအရွယ်အစားမကိုက်ညီလျှင်, ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
မီလီမီတာ / S က
ဝင်း: IP67, NEMA4 နဲ့ 6
optional: 110VAC / 1ph, 380V / 440V / 3ph, 50 / 60Hz
internal-ထားရှိအပူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ပွင့်လင်း115âတစ်±5â / ပိတ်97âတစ်±5â
2 M18 * 1.5
-30âï½ + 70â
အနိမ့်အပူချိန်ခုခံ actuator (-40âï½ + 70â)
အသုံးပြုသူများဖို့အရည်အသွေးမြင့် AOX-L ကိုစီးရီးလျှပ်စစ် operated linear actuator အာမခံနိုင်ဖို့အတွက်အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးဌာနကုန်ကြမ်းကနေရန်, နောက်ဆုံးဖြစ်စဉ်ကနဦးအနေဖြင့်လျှပ်စစ် actuator စစ်ဆေးရေးစီမံကိန်းအတွက်အပေါငျးတို့သတူရိယာများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသည် high-performance ကိုစမ်းသပ်ကိရိယာများ၏ချောထုတ်ကုန်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်, အဓိကတူရိယာများပါဝင်သည်: အမျိုးမျိုးသောပတ်ဝန်းကျင်မှာအင်နာလော့တူရိယာ, လျှပ်စစ် actuator ပြည့်စုံစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစမ်းသပ်, စတာတွေဆားမှုန်ရေမွှားစမ်းသပ်စက်မြင့်မားခြင်းနှင့်နိမ့်သောအပူချိန်စမ်းသပ်စက်,
ကျနော်တို့ပါဝါစက်ရုံနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ, Shipbuilding HVAC, Waterworks, ကမ်းလွန်, Pull & စက္ကူ, ဓာတု, ရေနံဓာတုဗေဒ, ရေနံချက်စက်ရုံ, စွမ်းအင်, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့, သတ္တုတွင်း, ဆေးဝါး, စားနပ်ရိက္ခာ & Beverage တစ်လုံလုံခြုံခြုံနဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။ AOX-L ကိုစီးရီးလျှပ်စစ် operated linear actuator ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးတန်ဖောက်သည်ကျေနပ်အောင်နှင့်မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်မှအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြေရှင်းချက်ပေးသညျ။
မေး: ဘယ်လောက်ကြာငါ AOX-L ကိုစီးရီးလျှပ်စစ် operated linear actuator ရဲ့နမူနာရဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်သလဲ
A: နမူနာအဆိုပါနမူနာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထိုကဲ့သို့သော DHL, UPS, TNT, FedEx နှင့် 3-5 ရက်အတွင်းရောက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းအဖြစ်ဖော်ပြ va လှေတျတျောမူပါလိမ့်မည် 3-5 ရက်အတွင်းဖြန့်ဝေဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Q: 100 ခန့်ကိုအပိုင်းပိုင်း AOX-L ကိုစီးရီးလျှပ်စစ် operated linear actuator ကိုဝယ်စေချင်ပေမယ့်ကျွန်မတဦးတည်းကြိုးစားကြည့်ချင် firist ။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏တောင်းဆိုမှုကို၏ဘယ်လိုထင်သလဲ
ဖြေကွိုဆိုနမူနာ order.No ငယ်လေးအရေအတွက်နှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ဖို့လိုသည်။
မေး: ငါတို့သည် skype ကအပေါ်ကိုပဌနာနိုင်သလား?
A: ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့နိုင်ပါတယ်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ထိုကဲ့သို့သောစတာတွေက e-mail ကို, WeChat, အဖြစ်ကျနော်တို့ကိုအလွယ်တကူပြောဆိုနိုင်ပါတယ်အများအပြား optional ကိုနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်
hot Tags:: လျှပ်စစ် operated linear actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်
စမတ် linear လျှပ်စစ် actuator
ရေ အထောက်အထား linear လျှပ်စစ် actuator
စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ linear လျှပ်စစ် actuator
ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား linear လျှပ်စစ် actuator
non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting ကို linear လျှပ်စစ် actuator